Shireen Abu Akleh, mpanao gazety Palestiniana malaza, maty voatifitry ny bala Israeliana teo amin’ny lohany · Global Voices teny Malagasy
Nantsoina hoe 'Feon'i Palestina' ilay isaonan'ny maro
Voadika ny 19 Jona 2022 5:14 GMT
“Tsy mora ny manova ny zava-misy, fa farafaharatsiny afaka nitondra ireo feo ireo tamin'izao tontolo izao aho,” hoy i Shireen Abu Akleh, mpanao gazety nisy namono, tamin'ny antsafa teo aloha momba ny faha 25 taona nanaovany tatitra momba an'i Palestina. Tamin'ny 11 May, maty voatifitra tamin'ny bala Israeliana teo amin'ny lohany izy, nandefa onjan’alahelo sy hatezerana ho an'ireo izay nanaraka ny tolona Palestiniana. Sary avy amin'i alwatan live, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Tamin'ny 11 Mey 2022 no namoahan'ny Raseef22 voalohany ity lahatsoratra ity. Navoakan'ny Global Voices indray ny lahatsoratra nasiam-panovana ho ampahany amin'ny fifanaraham-piaraha-miasa.
Niteraka onjan’alahelo sy hatezerana nanerana ny tontolo Arabo sy tany ivelany ny vaovaon'ny famonoan’ny tafika Israeliana ilay mpanao gazety Palestiniana malaza Shireen Abu Akleh tamin'ny bala teo amin'ny lohany tamin'ny 11 May, ka nahatonga antso ho fampitsaharana, indray mandeha ary ho an'ny rehetra, ny heloka bevava ataon'Israely amin’ny Palestiniana iray manontolo, ary indrindra ireo mpanao gazety.
Nisaonan’ny olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao ny famonoana an'i Shireen tao Jenin, ao amin'ny Morondrano Andrefana voabodo, raha nitatitra ny fidiran'ny tafika Israeliana tao an-tanàna.
NOVONOINA tamin'ny tifitra nataon'ireo Israeliana mpitifitra miafina teo amin'ny lohany i Shireen Abu Akleh raha nanao ny fiarovan-dohany sy ny akanjony tsy laitram-bala izay milaza hoe MPANAO GAZETY.
Mandra-pahoviana isika no hangina raha mbola mamono ny mpanao gazety ny “mpiara-dia” amintsika amin'ny filazana ny marina?
Nilaza ireo vavolombelona fa nanao akanjon’ny mpanao gazety sy fiarovan-doha ilay mpitati-baovaon’ny Al-Jazeera, amin'ny fanamafisana fa nokendren’ny mpitifitra miafina teo amin'ny lohany teo amin'ny faritra miseho amin'ilay fiarovan-doha izy — eo ambanin'ny sofina.
Raha ny filazan’ny mpanao gazety iray niaraka tamin’i Shireen tamin’ny fotoana nitifirana azy, tsy vitan’ny hoe nanao akanjo famantarana ho an’ny mpanao gazety izy fa nanao aroloha ihany koa.
Nifanehitra tamin’ireo mpitifitra miafina israeliana ireo mpitati-baovao. Tsy azo inoana fa diso kendry izy ireo. Notifirin’izy ireo i Shireen teo amin'ny faritra nisehoan’ny lohany mba hamonoana azy.
Amin'ny lahatsary izay niparitaka be tao amin'ny Twitter, hoy ny mpiara-miasa amin'i Shireen izay niaraka taminy teny an-kianja:
Teo amin'ny toerana tena akaikin’ny tafika (Israeliana) no nisy ahy sy ireo mpanao gazety namako. Niomana izahay, nametaka ny fitaovanay rehetra – ny aroloha, ny ampinga. Niandry an’i Shireen ho tonga izahay, niaraka tamin’ny mpiara-miasa iray hafa. Izaho no tonga aloha niaraka tamin'ny mpiara-miasa iray hafa. Nataonay izay hahitan'ny tafika anay. Nandroso metatra vitsivitsy izahay avy eo, ary voatifitra.
Ary hoy koa izy: “Taorian'ny fitifirana dia niezaka nanavotra an'i Shireen araka izay vitanay izahay. Nikendry an'i Shireen ireo mpibodo raha nanao aroloha izy. Teo ambanin'ny sofina ny ratra … Nikendry tsara ny famonoana anay ireo mpibodo tamin’ny alalan’ireo mpitifitra miafina.”
Voan'ny bala ihany koa teo amin'ny lamosiny izay notifirin'ny miaramila israeliana ilay mpamoka-baovaon'ny Al-Jazeera Ali Al-Samudi, izay nijoro teo akaikiny.
Maty teo an-kianja i Shireen, izay namoaka loharanom-baovao azo antoka momba ny herisetra sy ny fanitsakitsahan’ny Israeliana ny Palestiniana tany Morondrano Andrefana, tamin’ny fanaovana tatitra matihanina sy ny maha-fanta-daza azy endrika sy anarana, satria natao izay tsy ahafahan'ny mpitsabo sy ny ekipany manatona azy avy hatrany tamin'ny tifitra manao variraraka.
Fanamelohana sy alahelo
Nanameloka ny “famonoan'olona mahatsiravina izay manitsakitsaka ny lalàna sy ny fenitra iraisam-pirenena” nataon'ny fibodoana Israeliana tamin'ny mpanao gazety ny tambajotra Al Jazeera raha nanao fanambaràna, ary nanamafy fa “natao hanakanana ny fampitam-baovao tsy hampita ny hafany ity heloka bevavam-pankahalana ity.”
Raha nanamafy fa nanao akanjo famantarana mpanao gazety i Abou Akleh rehefa notifirin'ny miaramilan'ny fibodoana Israeliana, dia notanan’ny tambajotra ny governemanta Israeliana sy ny miaramilan'ny fibodoana ho tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ilay mpanao gazety, niantso ny fianakaviambe iraisampirenena mba “hanameloka sy hihazona ny fibodoana Israeliana ho tompon'andraikitra tamin'ny fikendrena sy famonoana niniana natao an'i Abou Akleh.”
Fanaon'ny tafika Israeliana matetika ny fikendrena ataon'ny miaramila amin'ny asa fanaovan-gazety satria mihazakazaka ry zareo amin'ny fampanginana ny tatitra herisetra sy heloka bevava ataon-dry zareo. Herintaona katroka lasa izay, tamin'ny 11 Mey 2021, nikendry sy nandrava trano avo iray izay misy ny biraon'ny Fikambanan’ny Gazety ao amin'ny Lemak'i Gaza ny fanafihana an'habakabaka Israeliana na dia teo aza ny tatitry ny AP izay namaritra ny “antso maika miverimberina avy amin'ny masoivohom-baovao amin'ny miaramila mba hampitsahatra ny fanafihana mananontanona.” Niantso ny fitokonana hoe “manafintohina sy mampihoron-koditra” ny AP.
Raha naneho hevitra momba ny famonoana an'i Shireen, nanoratra ny tambajotra Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) hoe: “ Lasibatry ny fibodoan’ny Israely ny mpanao gazety, na lahy na vavy, izay manao ny anjara andraikiny sy ny asany am-pilaminana, satria mampita ny marina izy ireo”.
Nisaona ny famoizana an'i Shireen, nanantitrantitra ny tambajotra fa izy no “feo nitondra an'i Palestina ho any an-tokantrano rehetra.”
Nanoratra ilay mpanao gazety Palestiniana Christine Rinawi fa “nitsangana ho maritiora taorian'ny nitaterany ny fandevenana maritiora an-jatony i Shireen. Anarana lehibe eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety i Sherine. Be fitiavana i Sherine. Mpanoro hevitra momba ny maha-olombelona i Sherine, ​​​​ny fanajana sy ny etika alohan'ny asa fanaovan-gazety. “
Teraka tamin'ny taona 1971 tao Jerosalema voabodo, nahazo mari-pahaizana BA momba ny asa fanaovan-gazety sy ny Media tao amin'ny Oniversite Yarmouk, Jordania i Abu Akleh. Iray amin'ireo taranaka voalohany tamin'ny mpanao gazety ho an'ny Al-Jazeera tany Palestina izy, raha niditra tao amin'ny fantsona tamin'ny taona 1997, herintaona taorian'ny nanombohany. Talohan'ny nidirany tao amin'ny tambajotra Qatari, niasa tao amin'ny Radio Palestine sy ny fantsona Amman Satellite i Abu Akleh.
Nandritra ny efa ho ampahefatry ny taonjato, no nitantarany sy nitateran'i Shireen tamin'izao tontolo izao ny herisetra sy ny fanafihan'i Israely ny vahoaka Palestiniana ao amin'ny faritany voabodo.
Tohina aho nandre ny fahafatesan'ilay mpanao gazetin’ny Al-Jazeera Shireen Abu Akleh, izay notifirin'ny tafika Israeliana tao amin'ny Morondrano Andrefana voabodo.
Tsy maintsy atao fanadihadiana ity famonoana mahatsiravina ity ary tadiavina ny rariny ho an'ny fianakaviany.
Tamin'ny antsafa teo aloha, nilaza momba ny loza atrehany rehefa mitatitra eny amin’ny toerana mampidi-doza i Abu Akleh, indrindra nandritra ny fananiham-bohitra Israeliana ny Morondrano Andrefana tamin'ny taona 2002: “Tamin'ny fotoan-tsarotra dia nandresy ny tahotra aho. Nisafidy ny asa fanaovan-gazety aho mba ho akaiky ny olona. Tsy mora angamba ny manova ny zava-misy, fa fara faharatsiny, afaka nampiely izany feo izany tamin'izao tontolo izao aho.”
“Nifidy ny asa fanaovan-gazety aho mba hanakaiky ny olona. Mety tsy ho mora ny hanova ny zava-misy fa farafaharatsiny aho afaka mitondra ny feon'izy ireo ho an'izao tontolo izao. Izaho no Shireen Abu Akleh”. Hitoetra mandrakizay io famantarana io. Mandria amin'ny hery sy ny fiadanana Shireen.
Tamin'ny antsafa hafa niarahana tamin'ny Al Jazeera, nilaza i Abu Akleh fa miampanga azy ho maka sary amin'ny faritry ny fiarovana ny fibodoana Israeliana, maneho ny fihetseham-pony tsy tapaka fa lasibatra izy ary mifanandrina amin'ny tafika fibodoana Israeliana sy ireo voanjo mitam-piadiana.
Iray amin'ireo fotoana nampisy fiantraikany taminy indrindra, hoy i Shireen, ny fitsidihany ny fonjan'i Ashkelon izay nahitany ny mahazo ireo gadra Palestiniana, izay misy amin’izy ireo no efa nandany 20 taona mahery tao am-ponja.
‘Maso ao amin'ny marina’
Tao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny Mada Masr, gazety tsy miankina ao Egypta, nanoratra i Sahar Mandour, mpanoratra tantara sady mpanao gazety Libaney-Egyptiana hoe:
Nandritra ny ankamaroan’ny androm-piainany, nitatitra ny vaovao feno sy avy tany amin'ny toerana nisy ny tranga i Shireen. Ary hitantsika feno, marina, tsy misy diso, ary avy eny an-toerana ihany koa izany rehefa izy no lasa vaovao.
Ao amin'ny pejiny Facebook, nanoratra i Mandor hoe: “Namono an'i Shireen Abu Akleh i Israely satria nanimba azy i Shireen. Hatramin'ny andro voalohany nijoroany teo anoloan'ny fakan-tsary sy nitondrany an’izao tontolo izao ho any afovoan'i Palestina, dia nanomboka ny tetika hamonoana azy izy. Natoky an'i Shireen izahay nandritra ny am-polo taonany maro sy ireo ady maro, nanomboka tamin'ny Intifada hatramin'izao, ary niara-nandeha taminy teny amin'ny havoana sy teo anelanelan'ny hazo izahay, nahita ny manodidina ny vohitra ary namafa ny araben'ny tanàna tamin'ny masonay. Nahita an'i Palestina tamin'ny alalany izahay, ary hitanay akaiky, mifanatri-maso, ny fibodoana.
Namarana ny teniny toy izao izy: “Mazava ho azy fa nanaitra mafy ny famonoana azy, saingy vokatry ny fikambanan-jiolahy voalamina izany. Tsy kisendrasendra na noho ny tsy fitandremana no nahatonga izany, fa fanapahan-kevitra sy fihetsika nahomby. Namono ny iray tamin'ireo maherifon'i Palestina i Israely.”
Mpikaroka ao amin'ny Foibe Palestiniana Masarat , Razi Nabulsi, nanoratra tao amin'ny Facebook:
Misy ranomaso androany any amin’ny faritra rehetra, any an-tokantrano tsirairay, izay misy fahitalavitra, any amin’ny faritra rehetra, any an-tokantrano tsirairay, any an-tokantrano Palestiniana tsirairay, mitomany izahay, Shireen Abu Akleh – Palestina.
Tiorkia 3 herinandro izay